Afrika Mainty · Avrily, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Afrika Mainty · Avrily, 2012
Tantara mikasika ny Afrika Mainty tamin'ny Avrily, 2012
Sénégal : Ry Zareo Senegaly Sy Ny toerana Misy Ny Demaokrasiany
Senegal 30 Avrily 2012
Raha toa mbola variana mitehaka an'ila Filoha teo aloha Abdoulaye Wade sy ny Demaokrasia Senegaly izao tontolo izao, ny tontolon'ny bilaogy senegaly kosa dia feno fanakianana ny tomban'asan'ilay filoha voahilika, A. Wade. Ampahatsiahiviny indrindra indrindra ireo niharan-doza nialoha ny fifidianana, ireo fanitsakitsahana ny zon'ny fanaovana gazety ary ireo ohatra mikasika ny faharatsiam-pitantanana.
Kenyà 30 Avrily 2012
Ginea-Bisao 30 Avrily 2012
Aly Silva dia iray amin'ireo mpitoraka blaogy malaza indrindra, raha tsy izy mihitsy no malaza indrindra, any amin'ny firenena kely andrefan'Afrika, ahitàna mponina 1 tapitrisa monja (jereo ny tafatafa nataon'ny Global Voices taminy). Olona miteraka adihevitra izy any amin'ilay firenena, satria tsy manafina ny fironany ara-politika. Nefa tsy mbola manam-paharoa izy raha resaka faharetana, fahavitrihana mamoaka lahatsoratra, ary ny fahazotoany manoratra blaogy.
Sénégal : #Sunu2012, Fomba Iray Hitan'ny Afrikana Hanaraha-maso Ny Fifidianana
Senegal 23 Avrily 2012
Ny harivan'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana izay ho filoham-pirenana senegaly, tamin'ny 9 ora alina i Pape Alé Niang mpanao gazetin'ny 2stv dia efa afaka nanome sahady ny fironana mavesatra avy amin'ireo vokatra. Ireo vokatra sy vinavinan'ny #Sunu2012 no navoakan'ny fahitalavitra senegaly ary avy amin'izy ireny no azo antoka fa nahafahana voalohany indrindra namoaka vokatra dieny vao tamin'ny 9 ora alina fotsiny.Sunu2012 dia tetikasa iray nosainina sy novokarn'i Cheikh Fall tamin'ny 2008. Ity no hahafantarana bebe kokoa momba io tetikasa io :
Tanzania 15 Avrily 2012
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 14 Avrily 2012
Mali 10 Avrily 2012
Tototry ny bilaogy, tweet, sy lahatsary avy any ivelany ny tontolon'ny aterineto, somary mangingina kosa ny mpiserasera maliana. Satria iharan'ny fahatapahan-jiro lava matetika ny renivohitra Bamako kanefa tsy misy ny lasantsy tokony hampadehanana ny tobim-pamatsiana herinaratra. Tsy ny fandefasana lahatsoratra arak'izany no vaindoha-draharaha fa ny ahitana vaovao momba ny zava-mitranga ao Avaratra.
Malawi: Fihetseham-po Ao Amin'ny Aterineto Manoloana Ny Fahalasan'i Mutharika
Malawi 10 Avrily 2012
Manaraka ny fihetsehana ao amin'ny aterineto manoloana ireo vaovao milaza ny fahatafatesan'i Bingu wa Mutharika i Victor Kaonga. Filoha fahatelon'i Malaoi i Mutharika. Maty noho ny fijanonan'ny fitepon'ny fo izy ny marainan'ny Alakamisy. Ity no fotoana voalohany indrindra handevenan'i Malaoi filoha amperin'asa. *fanavaozana: Nanao fianianana amin'ny mahafiloha azy tao amin'ny Parlemanta ao Lilongwe tamin'ny 7 avrily 2012 lasa teo ny Filoha-levitra Joyce Banda.